Top Tips For Rokufambira With Pets Your | Save A Train
musha > Travel Europe > Top Tips For Rokufambira With Pets Your
Izvi Top Tips kuti kufamba kwenyu dzinovaraidza vanofanira kubatsira kuderedza kuzvidya mwoyo kwenyu. Nekuti regai pachena, vaifamba yenyu mhuka dzinovaraidza anoshungurudza! Asi chii zvakawanda anoshungurudza, ipfungwa yekusiya yako mhuka kumba kana kuchengetwa nevamwe. Zviri pachena, hapana anovatarisira sezvaunoita! Rudyi?
Pane zvakawanda zvaunogona kuita kuti zvokuita kana uri kufamba pamba. Dog Hotels, kuhaya muchengeti, kana kuendesa mutoro, kunyange munhu akanaka chete, kuti shamwari yako vari pakati sarudzo. Ava rakajairika kuti vanhu vade. zvisinei, dzimwe nguva hakuna mumwe chisarudzo uye unofanira kufamba kwako dzinovaraidza. Nepo zvingava zvikuru yakaoma nzira, Save A Train ane zvimwe pamusoro mazano kuti achakubatsira paunenge vaifamba dzinovaraidza!
Pet Tips 1: Uyai A munokuridzirwa!
Kuenda itsva nzvimbo zvinogona uye zvimwe achava musoro wako dzinovaraidza. Saka nechokwadi chokuti anoramba sezvo vagadzikana sezvinobvira kunokosha hwomutambarakede rwendo vose vanobatanidzwa. Uyai matoyi ake dzose, magumbeze, uye zvimwe zvinhu zvinogona kuita kuti imbwa yako kana katsi igadzikane. Vakanga akadzikama uye havana kuita chinhu chakaipa? Ivai nechokwadi kuti imi mubayiro kuti kufamba dzinovaraidza vasununguka mune ramangwana.
Pet Tips 2: asi Kwete wo vazhinji Treats…
Ndinofunga seizvi zviri pachena, asi ndinoenda kuperetera izvozvo nokuti anokuda! Regai kuvapa rinorema kudya kana kurega vanwe mvura yakawandisa zvokuti dzinovaraidza wako achava vasina shungu kuvasunungura pacharo mune imwe netsa dzashanduka! (Hatina akanyevera kuti kufamba kwenyu dzinovaraidza kunogona runonyengera!)
Pet Tips 3: kusimbisa muviri
Uchida kana kwete, aya Matipi Ekumusoro ekufamba nezvipfuyo zvako zvinoreva kuti iwe uchafanirwa kuita imwe nzira yekurovedza muviri! Just usati watanga vanofambira, kuvatora vamwe kurovedza muviri! Nemhaka yokuwedzera-refu kufamba kana vanomuda zvikuru neshamwari yako mudiwa fluffy, iye kana iye ave wakarurama vaneta kunetseka pamusoro pezvinhu. kana wawana katsi kuti haisi saka kwazvo kubatwa kuti run, edza kuti akurudzire kwavari mukati. Gadzira-chinja matoyi anogona kuuya muchimiro chevhu guruva semuenzaniso! Vimba neni… Ndine ruzivo mu vaifamba dzinovaraidza!
Pet Tips 4: Research Embassy Zvinodiwa
Nyika dzinosiyana pane zvadzinoda. Nyika zhinji zvinoda kupatsanura varwere nguva, saka kana uchida kupedza nguva vaifamba yako dzinovaraidza, nechokwadi iwe kaviri tarisa ichi! nyika dzakawanda zvinoda kwepfuti kuti chimbwamupengo, bordetella (usamo chikosoro), uye parvo. Dana nhume uye kutsvakurudza yako paIndaneti kuona nyika zvinodiwa, uye nechokwadi kuti nyaya dzemapepa yako batsira apo kuyambuka muganhu.
Iwe unogona kutsvagurudza uchifamba nezvipfuyo uye zvinodiwa nenyika pa PetTravel.com.
Health zvitupa zvinodiwa Airlines, muganhu zviremera, Hotels, dzinovaraidza-care nzvimbo, nevamwe kana kufamba kwenyu dzinovaraidza. Muzviitiko zvakawanda, kana kufamba dzinovaraidza unofanira kuwana chitupa chenyu utano mukati 10 mazuva kutanga rwendo rwenyu. Anotsvakurudza dzakananga zvinodiwa kwenyu avaiita vasati vashanyira Vet, saka yavangagona zvose zvakafanira muna chitupa.
6. Chengeta An Electronic Copy Of Your Pet kuti Health Certificate
vazhinji Hotels, famba dzaishandisa, bhabhadzira kuchengetwa nzvimbo, Airlines, uye tsika uye immigration masangano vanoda rakadhindwa chinyorwa hwechipfuwo wako wemhuka chitupa. Panzvimbo kudhinda kure reams emakopi zvose zvinobvira Somuenzaniso, kupirinda kure vakaroorana uye chengeta wemagetsi kopi kana kufamba dzinovaraidza.
Myscha Theriault ndiye anotengesa zvakanyanya munyori uye wepasirese-akabatanidzwa ekufambisa munyori anofamba kuzere nemurume wake wezvesainzi mutori wenhau murume uye hofori Labrador retriever. Naye Electronic kopi batsira, ari akagadzirira kubereka utano zvitupa imbwa yake nguva dzose sezvinodiwa.
“The hotera yezvebhizimisi centre aidhinda anondibvumira kudhinda PDF kopi yedu Labrador kuti bara zvinyorwa sezvo zvaida, Somuenzaniso pose tinofanira bhuku imwe masikati kuti daycare naye kubva mumugwagwa. Chinochengeta bepa marara pasi zuva nezuva, akaramba aigadzirira ekupedzisira yemaminitsi kuchinja purogiramu yedu.”
Just kana chinhu chinoitika mumugwagwa, haudi kuva scrambling kuwana anonyatsozivikanwa Vet. Kunyora nokudyidzana mashoko mashoma Vets munharaunda chauri kushanya usati watanga kufamba dzinovaraidza.
Tinovimba izvi Top Tips kuti kufamba kwenyu dzinovaraidza kunge nekurerusirwa tsinga dzako zvishoma! Ngatizive kana uine chimwe pamusoro mazano kuudza Save A Train uye munharaunda yedu. Taitofanira rudo kunzwa kubva kwauri!
Unoda embed yedu Blog romukova “Top Tips For Rokufambira With Pets Your” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-traveling-with-your-pets%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#petlover #mhuka #katsi #imbwa #mhuka dzinovaraidza #matinji #kufamba kwemhuka #travelwithpets europetravel trainjourney